Accounting, Auditing & Finance Manufacturing & Warehousing Jobs in Yangon | MyJobs
Accounting, Auditing & Finance Manufacturing & Warehousing Jobs in Yangon
ရန်ကုန်မြို့တွင်း Customer ဆိုင်များထံတွင် ငွေကောက်/သိမ်း ရမည်။ ဘဏ်များတွင် ငွေလွှဲ၊ ငွေထုတ် ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရမည်။ ထုတ်ယူလာသည့် ငွေများအား ငွေစာရင်းဌာနတွင် တိကျသေချာစွာ ပြန်လည်အပ်နှံရမည်။ ငွေကြေးပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အပြည့်အ၀တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း Customer ဆိုင်များထံတွင် ငွေကောက်/သိမ်း ရမည်။ ဘဏ်များတွင် ငွေလွှဲ၊ ငွေထုတ် က ...
Senior Accountant (Female - 1Post)
New Century Paper 'NCP'
MMK 600,000 - 800,000 Negotiable
စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳအနည္းဆံုး(၃)ႏွစ္ ရွိၿပီး အခြန္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို တတ္သိနားလည္သူကို ဦးစားေပးမည္
စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳအနည္းဆံုး(၃)ႏွစ္ ရွိၿပီး အခြန္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို တတ္သိနားလည္သူကို ...
• Product costing • Financial report • Account receivable & payable report • Budget control
ဖော်ပြပါရာထူးအား လျှောက်ထားလိုပါက- ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း၊ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၁) ပုံ ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာမူရင်း ၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာမူရင်း၊ သန်းခေါင်စာရင်း မိတ္တူ၊ အလုပ်သမားမှတ်ပုံ တင်မိတ္တူ၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းထောက်ခံစာနှင့်တကွ အောက်ပါ အတိုင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ဖော်ပြပါရာထူးအား လျှောက်ထားလိုပါက- ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း၊ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၁) ပုံ ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ ...
Age 30 - 40 years B.com graduate (LCCI level3UK , ACCA , CPA ) Can Speak and Write English Fluently Prefer Manufacture and oversea experience
Age 30 - 40 years B.com graduate (LCCI level3UK , ACCA , CPA ) Can Speak and Write English ...
To convey data to management inaway and format they can clearly see and understand. To ensure complete, systematic and timely distribution of financial information to all key stakeholders involved in planning process to make timely and sound decisions. The position reports to the Financial planning & analysis Manager.
To convey data to management inaway and format they can clearly see and understand. To ensure ...
Minimum Qualification: Bachelor Experience Level: Junior level Experience Length:2years
Accountant (Dy-Manager level)
Accountant (Dy-Manager) level is responsible for reviews, investigates, and corrects errors and inconsistencies in financial entries, documents and reports. Maintain system of accounts and keep records on all transactions and assets.
Accountant (Dy-Manager) level is responsible for reviews, investigates, and corrects errors and ...